Actress Samikchhya (interview)
Topic: Actress Samikchhya (interview)
Author Topic: Actress Samikchhya (interview) (Read 5326 times)
« on: February 16, 2015, 01:08:42 AM »
क्षमता भएरमात्र फिल्मी क्षेत्रमा टिक्न सकिँदैन: नायिका समिक्षा
चलचित्र क्षेत्रमा कसरी आउनुभयो ?
म चितवन छँदा डान्स क्लास लिन्थे । डान्स सिक्दासिक्दै काठमाडौं आएँ । काठमाडौं आएर अभिनयको कक्षा लिएँ । अभिनयको कक्षा लिएलगत्तै मुभीमा अफर आयो । त्यसपछि बिस्तारै यो दुनियामा रमाउन थालेँ ।
कुन मुभीबाट डेब्यु गर्नु भयो ?
त्यतिखेर ‘याक्सन’ नाम थियो । रामजी लामिछानेको मुभी हो । अहिले नाम परिवर्तन भएको छ । त्यति बेला म अभिनय सिक्दै थिएँ । मुभीको कथाबस्तु अनुसार म फिट हुने भएकाले मलाई अफर आएको थियो । भुमीका हेरेपछि गर्न सक्छु भन्ने लाग्यो अनि काम गरेँ ।
कलाकारितामा कस्को प्रेरणाले आउनु भयो ?
मेरो सानै देखिको रहर हो कलाकारिता । कसैको करकापमा आएको होइन । मेरो बच्चैदेखिको सपना चलचित्र क्षेत्रमा केही गर्छु भन्ने थियो । त्यसैले यहि क्षेत्रमा आएँ ।
तपाईले चलचित्रमा देखेको सपना र यथार्थ कत्तिको मिल्दो रहेछ ?
केही न केही फरक त सबै क्षेत्रमा हुन्छ । तर, सबै क्षेत्रमा काम गर्न, मान्छेहरुसँग भिज्न, ब्यवहारहरु बुझ्दै जाँदा अलिकति गाह्रो सबै ठाउँमा हुन्छ । कुनै पनि क्षेत्रमा गाह्रो भयो भनेर डराएर पछाडि हट्नु भन्दा पनि काममा निरन्तरता दिने हो । आफूले राम्रो काम गर्न सक्यो भने संसार सबै राम्रो हुन्छ । राम्रो नराम्रोको कुरा गर्ने हो भने संसारका हरेक क्षेत्रमा राम्रो नराम्रो दुबै पाटो हुन्छ । फिल्ममा पनि छ ।
फिल्म क्षेत्रमा पनि नराम्रो देख्नु भयो ?
राम्रो नराम्रो अन्त पनि छ । नराम्रो सोच भएका मान्छेहरु अन्त पनि हुनुहुन्छ । यहाँ पनि हुनुहुन्छ । कुनै पनि व्यवसायमा एकदम राम्रो मान्छे मात्रै हुनुहुन्न । फिल्ममा पनि नराम्रो मान्छे मात्रै पनि हुनुहुन्न । राम्रो मान्छे पनि धेरै हुनुहुन्छ ।
तपाईले बुझेको चलचित्र क्षेत्र कस्तो छ ?
फिल्म क्षेत्र कस्तो भन्दा पनि मान्छेहरुले नराम्रो हल्ला चलाएका छन् । यो फिल्ड एकदमै नराम्रो छ । यहाँ विकृति छ भनिन्छ । ग्ल्यामर फिल्ड भनिन्छ । ग्ल्यामर फिल्ड त हो । तर, अरुले जे गर भन्यो त्यही गर्नु पर्छ भन्ने होइन । आफ्नो पनि इच्छा हुन्छ । आफूले जस्तो चाहेको हो त्यस्तै गर्न पनि हुन्छ ।
ग्ल्यामर मात्रै भन्दा पनि पछिल्लो समय भल्गर बढि भयो भन्छन नी ?
भल्गर मुभी गर्ने कि नगर्ने भन्ने आफ्नो कुरा हो । भल्गर मुभी छ, आफू त्यो मुभीमा फिट हुदिन, गर्न सक्दिन भन्ने लाग्छ भने किन गर्नु पर्यो र ? पछिल्लो समय भल्गर बढेकै हो । तर, गर्नैपर्छ भनेर कसैले कसैलाई भनेको छैन ।
तपाई चलचित्र कसरी छान्नु हुन्छ ?
सुरुमा हामीले स्टोरीनै छान्नु पर्छ । चलचित्रको मुख्य पाटो भनेकै स्टोरी हो । त्यसपछि फुल मुभी हेर्नु पर्छ । त्यती मात्रै नहेरेर आफूले कस्तो क्यारेक्टर निर्वाह गर्न सकिन्छ र चलचित्रले कस्तो क्यारेक्टर मागेको छ त्यो पनि हेर्नु पर्छ । म क्यारेक्टरलाई पनि हेर्छु । आफुले जतिसम्म दिन सक्छु जस्तो लाग्छ त्यस्तो क्यारेक्टर छान्छु ।
दिन सक्ने भनेको के हो ?
भल्गर भन्दा पनि आफ्नो कला देखाउन सकिने । आफू भित्र भएको अभिनय क्षमता देखाएर चलचित्र हेर्ने प्रत्येक दर्शकका अगाडि कलाकार भनेर चिनिन सकुँ ।
तपाईको बिचारमा कतिसम्म ग्ल्यामर र कतिसम्म भल्गर भन्ने ?
ग्ल्यामर भनेको एउटा एक्सोसन हो । कुनै सिन दिदा स्टोरीसँग रिलेटेड छ भने कलात्मक ढङ्गबाट बेडसिन दिदा पनि फरक पर्दैन । फिल्डनै ग्ल्यामर भएकाले केही न केही त दिनै पर्छ । तर, भल्गर कथा एकातिर सिन अर्कोतिर ओपनली भयो भने त्यो हो ।
अहिलेसम्म कस्तो खालको भुमीका निर्वाह गर्नु भएको छ ?
प्रत्येक अभिनय फरक–फरक खालको छ । एउटा मुभीमा टिन एजको केटीको भुमिकामा काम गरेको छु । धेरै जसो गाउँले केटीको क्यारेक्टरमा देखिएको छु । भर्खरै एउटा मुभी सकाए, त्यसमा चाहिँ सहरकी धनी बिग्रेकी केटीको भुमीका निर्वाह गरेकी छु । बिग्रेको भन्दा पनि पैसाले मातेको केटीको भूमीकामा छु । अहिलेसम्म गरेको कुनै पनि मुभीमा मेरो एउटै क्यारेक्टर दोहोरिएको छैन । टाईगर द रियल हिरोमा एउटा सोझी केटीको भुमिकामा छु ।
‘टाईगर द रियल हिरो’मा तपाईको मेन रोल छ ?
टाइगर सबै टाईगर । त्यो मुभी हेरेपछि नै थाहा हुन्छ । बास्तविक टाइगर को हो भनेर जान्न मुभीनै हेर्नु पर्छ ।
आगामी दिनमा कसरी अगाडि बढ्ने सोच छ ?
अहिले म ग्याप बसिराछु । ग्यापमा किन पनि छु भने मैले यो क्षेत्रमा जान्नु पर्ने धेरै छ ।सबै सिकेर पर्फेक्ट भएर मात्रै चलचित्रमा जाने बिचार छ । मेरो राम्रो कलाकार बन्ने सपना छ । सफल कलाकार बन्न अभिनय र नृत्य मात्रै जानेर पुग्दैन । क्षमता भएरमात्र फिल्मी क्षेत्रमा टिक्न सकिँदैन ।को सँग कस्तो व्यवहार गर्ने लगायतका धेरै कुरा सिक्नु पर्छ ।
निर्माता निर्देशकले क्षमता भन्दा अन्य कुरा हेर्ने भएकाले यो लाईनमा नायिकालाई गाह्रो छ भन्छन् नी हो ?
नायिकालाई मात्रै होइन नायकलाई पनि गाह्रो छ । आफुसँग क्षमता नभएको मान्छे दुई दिनको लागि हो । त्यो लामो समय टिक्न सक्दैन । निर्माता निर्देशकको कुरा सुनेर यो फिल्डमा आउने टिक्नै सक्दैनन नी । जोसँग क्षमता छ । उ कहिल्यै पनि पछाडि हट्दैन ।
क्षमाता मात्रै भन्दा पनि व्यक्तिगत कुरा गाँसिएका हुन्छन भन्छन् नि ?
त्यो भनेको कति दिन टिक्छ र ? सबै एउटै स्वभावको हुनुुहुन्न । फरक हुनुहुन्छ । एउटा कलाकारले सधै एउटै निर्देशकसँग बसेर काम गर्ने होइन नी । त्यसैले कसैले नराम्रो गर्यो भने अर्को राम्रो निर्देशक छानेर जानुपर्छ ।
तपाईले त्यस्तो भोग्नु परेको छ ?
त्यति धेरै छैन । तर, प्रस्तावसम्म त जहाँ जस्ले पनि गर्छ । यस्ता मान्छे चलचित्रमा मात्रै होइन अन्त पनि छन् । मान्छेको स्वभाव हो । यस्ता कुरा एउटा कानले सुन्ने अर्को कानले उडाउने हो ।
निर्माता निर्देशकले प्रस्ताव चाहि राख्छन् ?
कसैलाई तोकेर मलाई यसले प्रस्ताव राखेको छ म भन्दिन । के गर्ने के नगर्ने भन्ने निर्णय आफूले गर्ने हो । उहाँहरुले भनेका सवै कुरा मान्नु पर्छ भन्ने छैन । तर, आजसम्म मलाई आम्ने साम्ने भएर कसैले यहाँ जाउ, त्यँहा जाउ भनेको छैन । अप्रत्यक्ष रुपमा त कति सुनिन्छ कति । तर, त्यस्तो कुरालाई प्राथमिकतै दिन्न ।
प्रेमको विषयमा तपाईको बिचार ?
प्रेम फिलिङ्स हो । जुन दिन जो केटासँग फिलिङ्स आउँछ उसैसँग लभ पर्छ । अहिले प्रेमको विषयमा चाहिँ नबोलौ । कसैसँग मेरो प्रेम छैन ।
सेक्सको विषयमा तपाईको विचार ?
सेक्सको विषयमा मलाई केहि पनि थाहा छैन ।
सबैले नेपाली चलचित्रलाई भन्दा हलिउड, बलिउडका चलचित्रलाई प्राथमिकता दिनु भएको छ । हुन त नेपाली चलचित्रले हलिउड बलिउडसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन । तर, हामी नेपाली भएको नाताले हाम्रा चलचित्र हेर्ने बानी बसालौँ । चलचित्र नहेरी बाहिर कमेन्ट गर्ने बानी छ । त्यो भन्दा चलचित्र हेरेर सुर्धानु पर्ने ठाउँ औलाईदिनु होला ।
samikchhya.jpg (222.41 kB, 763x659 - viewed 188 times.)